AMEX ကာစီနိုစာရင်းဗြိတိန်နိုင်ငံ | ထိပ်တန်းအခမဲ့အပိုဆုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် |
နေအိမ် » AMEX ကာစီနိုစာရင်းဗြိတိန်နိုင်ငံ | ထိပ်တန်းအခမဲ့အပိုဆုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်
on-the-Go ကိုဂိမ်းတွေအတွက် AMEX ကာစီနိုစာရင်း
မှတ်စု: American Express ကကာစီနိုစာရင်းဗြိတိန်နိုင်ငံအဘယ်သူမျှမရှည်လျားတဲ့လက်ခံခဲ့သည်နေကြတယ် – သို့သော်အခမဲ့ငွေကို Bucket Load အားဖြင့်ဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်!
အဆိုပါ American Express ကကာစီနိုအွန်လိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများက Randy ခန်းမ နှင့် Express ကိုကာစီနိုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းရေးအဖွဲ့ – နှင့် Thor ThunderStruck Express ကိုကာစီနိုများအတွက်
AMEX ကာစီနိုစာရင်းနှင့်အတူသင်တို့အားသိပြီ, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုသည်? eWallet ရွေးချယ်စရာ အသုံးပြု. ဤအဖြစ်ဆန့်ကျင်, တဦးတည်းရဲ့အကောင့်ပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာ, ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံအကောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရနိုင်ခင်. ဒီကစားသမားအနည်းငယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကလစ်ကွာထိပ်ဆုံးသိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေများနှင့်စူပါကြောက်မက်ဘွယ် cashback သို့မဟုတ် Top-up kickbacks မှအကျိုးအမြတ်မှဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတာမသာ, ဒါပေမယ့်လည်း un-Interrupt slot သေချာ, ကစားတဲ့, Blackjack, ဘင်ဂိုကစား, သို့မဟုတ် Poker ဖျော်ဖြေရေး.
အများဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမရှိတော့ကိုလက်ခံပေမယ့် AMEX ကာစီနိုအွန်လိုင်း ခိုင်လုံသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်သိုက်, ဒါကြောင့်ဆဲကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံးကတ်ထုတ်ပေးသူကုမ္ပဏီများထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုသို့သောထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုနှင့် mFortune မိုဘိုင်းကာစီနိုအဖြစ်ထိပ်ဆုံး Express ကိုကာစီနို rated ဆိုဒ်များဦးအပေါင်းတို့ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ clamoring နေကြတယ်သောဤအကြောင်းပြချက်သည်အဖွင့် AMEX လက်ခံခြင်းကာစီနိုဂိမ်း.
ထိပ်တန်း£5ငွေ Up ကို Sign + £ 200 Deposit အပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
get £5+ £ 200 အခမဲ့အပ်နှံအပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
get £5+ £ 100 ကိုအခမဲ့အပ်နှံအပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
ရယူ 60 အခမဲ့လှည့်ဖျား + 100% သိုက်ပွဲစဉ် ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
£ 10 + £ 20 + £ 100 ကိုစသည်တို့ကို. အခမဲ့အပိုဆုကြေးငွေ Galore! ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
get £ 10 အခမဲ့ ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
£ 10 + £ 100 ကိုအခမဲ့အပ်နှံအပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
£ 10 Get + £ 200 အခမဲ့အပ်နှံအပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
£5+ £ 225 အပ်နှံပွဲစဉ်အပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
£5+ £ 500 အပ်နှံပွဲစဉ်အပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
ဗြိတိန်၏ အကောင်းဆုံး AMEX ကာစီနို ငွေပေးချေမှုရမည့်ပရိုမိုးရှင်းအကျိုးကျေးဇူးများ
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမုန်တိုင်းအားဖြင့်လောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းယူပြီးနေကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသောကွောငျ့ကစားသမားခံယူသောအလွန်ကြီးစွာသောအထူးနှုန်းများနှင့်အပေးအယူများဖြစ်ပါသည်. ဘယ်နှစ်ယောက်အုတ်-and မော်တာကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုသင်သိကြဘူးတကယ်တော့ကစားသမားပေး အခမဲ့သိုက်ဆုကြေးငွေ ရုံကိုမှန်ကန်ငွေကစားဘို့?
ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုအကောင်းဆုံးအချို့ရှိပါတယ် AMEX ကာစီနိုဗြိတိန်နိုင်ငံ ရရှိနိုင်သိုက်ဆုကြေးငွေ. ကစားသမားတစ်ဦးအခမဲ့£5ကြိုဆိုဆုကြေးငွေရကြဘူးပဲတက်လက်မှတ်ထိုးဘို့မသာ, ဒါပေမဲ့တကယ်ပိုက်ဆံသိုက်အောင်သွားလည်းအကျိုးခံစားခွင့်များဝန်ရှိပါတယ်! ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြု depositing အသစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားသိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေအတွက်£ 200 အထိလက်ခံရရှိဒါပေမဲ့လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်လွန်းမှအကြိုးအတှကျအခြားကမ်းလှမ်းမှု၏ဝန်ရှိပါတယ်!
အထိုင် Weekend လည်: Lara Croft Tomb Raider နဲ့ Thor Thunderstruck မှသင်အကြိုက်ဆုံး slot နှစ်ခုဂိမ်း Play, မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းသန်းပေါင်းများစွာနှင့် Thrones ၏ဂိမ်းရန်နှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းခံယူ
£ 20 တိုင်းကိုအခမဲ့ 125 ရရှိခဲ့သည် VIP အချက်များ
10% Cashback အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်နှင့် Top-Up ကိုအပိုဆုကြေးငွေ
တနင်္ဂနွေတိုငျးရငျးသား & Prize ကို Giveaway
သင်တစ်ဦးဆိုရင် မိုဘိုင်း slot ဝါသနာအိုးဖြစ်လျှင်ဤကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. ရိုးရှင်းစွာ TS ဖတ် & CS you'v မှာကစားရန်ဆုံးဖြတ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန် AMEX လက်ခံလောင်းကစားရုံ နှင့်အဓိကရပြီးရင်းသင့်ဖြစ်နိုင်.
မိုဘိုင်း slot အတော်လေး '' သင့်ရဲ့အရာမဟုတ်ရင်တောင်’ ၏အားသာချက်ယူအခြားကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာ AMEX ကာစီနိုသိုက်ဆုကြေးငွေ၏ဝန်ရှိပါတယ်. အွန်လိုင်း CoinFalls ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အံ့သြဖွယ်အထူးနှုန်းများရှိပါတယ်. သူတို့ရဲ့£5မရှိသိုက်ထက်အခြား + £ 500 သိုက်ပွဲစဉ်ကြိုဆိုဆုကြေးငွေ, ကတ်ကိုဂိမ်းနိူးအ Blackjack တနင်္လာနေ့မြှင့်တင်ရေးခစျြလိမျ့မညျ: ရိုးရှင်းစွာအမိုဘိုင်းကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပေါ်သို့ log, 20 American Express ကကာစီနိုသိုက်£နိမ့်ဆုံးပါစေနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း£ 50 ဦးကိုမှန်ကန်ငွေသားအနိုင်ရမှတစ်မဲနှိုက်ထဲသို့မဝင်ရ!
ကမ္ဘာ့ဖလားဘွဲ့လောင်းကစားရုံဂိမ်း developer များ, ဖြစ်နိုင်ခြေအားကစားပြိုင်ပွဲ, လည်းထိုကဲ့သို့သော AMEX ကာစီနိုစာရင်းအဖြစ်အနည်းဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်သိုက်အပေါ်အကြီးအကျယ်ပြန်ဆက်ကပ်. သူတို့အာဏာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားလုံး - ထိုသို့သောအဖြစ် မိုဘိုင်းဂိမ်းများ, LadyLucks ကာစီနို, အလွန်ဂတ်စ်, နှင့် Elite မိုဘိုင်းကာစီနို - ပြီးသားတသမတ်တည်းအဓိကမှန်ကန်ပိုက်ဆံငွေသားကိုအနိုင်ပေးထွက်ပေးဆောင်များအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအကောင်းတစ်ရပ်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြ.
American Express ကကာစီနိုငွေကြေးကြိုတင်, no-အပ်နှံဆုကြေးငွေ & ရီးရဲလ်ငွေ Entertainment က
သူကပြောပါတယ်, ဤအ American Express ကသိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားလုံးသင်သည်သူတို့အားလုံးတူနေကြောင်းစဉ်းစားထဲသို့တူညီသောကွန်ယက်ကိုလူမိုက်များက powered နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမသွားပါစေပါဘူး: LadyLucks £ 20 ကမ်းလှမ်းနေချိန်တွင်အားလုံးအသစ်ကကစားသမားအားဆုကြေးငွေကြိုဆိုပါတယ်, Elite မိုဘိုင်းကာစီနိုမှတက်ဝင်ငွေမှတစ်မူထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းတင်ဆက် £ 800 ငွေသားပွဲစဉ် ကစားသူတစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးပေါ်3ဆက်တိုက်သိုက်. တောင်မှအမှန်တကယ်ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံကိုအလွန်ကွာခြား:
မိုဘိုင်းဂိမ်းများ လောင်းကစားရုံဖျော်ဖြေရေးနှင့်အာမခံချက်ကစားသမားဖို့ရန်အလွန်လျှာကို-and ပါးချဉ်းကပ်အမြဲတမ်းရယ်မောရှိထားပါတယ်. သို့သော်အဘယ်သူမျှမသိုက်အပေါငျးတို့သ bling အကြောင်းကြောင်းနှင့်ကစားသမားများထွန်းတောက်အလင်းအိမ်နှင့် Las Vegas တွင်၏ကြီးမားသောတုန်လှုပ်တွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းအလွန် Vegas မှအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး AMEX ကာစီနိုသိုက်အောင်မသွားမီ, တတ်နိုင်သမျှဤကြီးစွာသောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏အဖြစ်အများအပြားမှာကစားရန်မှတ်ပုံမအဘယ်ကြောင့်?
slots ဘယ်သူမျှမကသိုက်အပိုဆုအားကစားပြိုင်ပွဲ နှင့် freeplay သရုပ်ပြရွေးချယ်စရာသင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်…တဖန်သင်တို့ PocketWin ရဲ့ထားလျှင် AMEX Card ကိုကာစီနို စာရင်းထဲမှာပေါ်နှင့် mFortune မိုဘိုင်းကာစီနို, သင်လည်းအနိုင်ရသောအရာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အစိုင်အခဲအခွင့်အလမ်းရပ်ပါလိမ့်မယ်! သာ. ကောင်း၏နေဆဲ, ဤသူတို့သည်အသီးအသီး အွန်လိုင်းဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ လောင်းကစားဝိုင်းကလပ် '' Winner ဘုတ်အဖွဲ့များ’ အခြားအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးသောဂိမ်းကိုသင်ပြသသောနှင့်နိုင်ငွေဇယား, and the amounts that were paid out.
အခမဲ့အဘို့အအပေါ်ကပုံရိပ်တွေပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ AMEX ငွေကြိုတင်ပေး အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုသင့်£5အခမဲ့တိုင်ကြား! ယခု!
Express ကိုကာစီနိုကိုအားပေးအားမြှောက် တာဝန်ရှိလောင်းကစား နှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Fair Play မူဝါဒများမှလိုက်နာစောင့်ထိန်း. လုံခြုံရေး features နဲ့သင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဂိမ်းပိုကောင်းလက်၌ဖြစ်နိုင်ဘူး AMEX ကာစီနိုစာရင်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်ဒီ. ထို့အပွငျ, ဤနေရာတွင် featured အဆိုဒ်များအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံးများ 24/7 ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ, ဒါကြောင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှဒေါင်းလုတ်ဆွဲနှင့်အတူကြုံတွေ့ အခမဲ့ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ apps များ, အခမဲ့အပိုဆုကြေးငွေဟုဆို, နားလည်မှုကို အွန်လိုင်း Blackjack မဟာဗျူဟာ, စစ်မှန်သောပိုက်ဆံသိုက်အောင်နှင့် In-အကြားအခြားအရာအားလုံးသည်အလျင်အမြန်နဲ့ချက်ချင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်. ပေမဲ့ AMEX ကဒ်လက်ခံသောကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဗြိတိန်တွင်အနည်းငယ်ဖြစ်ကြပြီးယခုအချိန်အထိအကြား, သင်မည်သည့်အရေးယူမှုအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှသေချာစေရန်အခြားရွေးချယ်စရာသိုက်နည်းလမ်းများအများအပြားတွေ့ပါလိမ့်မယ်. မင်္ဂလာလောင်းကစား!
အကြောင်းပိုထွက်ရှာမည် ဗြိတိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှု & ထိပ်တန်းမှန်ကန်ပိုက်ဆံကိုအနိုင်ပေး!
ပူးပေါင်း & ဒီနေ့အနိုင်ရရှိမှု Start!
Ukash ကာစီနိုဆိုဒ်များအပိုဆု | ထိပ်တန်းအခမဲ့သိကောင်းစရာများ